Rodo - E-afovoany
MISAOTRA NY FANAOVANA GDPR
Raha ny momba ny fampidirana an-kery ny 25 may 2018 momba ny fepetra vaovao momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana (GDPR) dia tianay hampahafantarina anao fa ao amin'ny tranobalanay ny angon-drakitrao manokana ary nanao ny ezaka rehetra izahay hiantohana ny fiarovana azy ireo.
Amin'ny maha Administrator Data, Ibs Poland Sp. z: o. ao amin'ny Gdynia dia manamboatra ny angon-drakitrao ho an'ny tanjona mifandraika amin'ny fanomezana ny serivisy, ao anatin'izany ny fifandraisana tsy tapaka, ny varotra, ny fampiroboroboana sy ny fivarotana, ary koa ny fifandraisany amin'ny mety hiseho rehefa vita ny fifanekena na vita ny serivisy.
Amin'ny fampiasana ny tranokala www.e-centrum.eu dia mpampiasa azy ianao. Fanatanterahana ny adidy ara-dalàna mifanaraka amin'ny zavakanto. 13 fizarana 1 sy ny entana 2 amin'ny Fitsipika momba ny fiarovana ny data ankapobeny an'ny EU eropeana 2016/679 tamin'ny 27 aprily 2016, te-hampahafantatra anao izahay fa:
1. Ny mpandrindra ny data manokana dia Ibs Poland Sp. ao amin'ny Gdynia Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,
2. Nanendry mpiaro mpiaro data izahay izay afaka mifandray amin'ny e-mail: biuro@ibs-24.eu na amin'ny telefaona +48 58 333 1000 amin'ny tranga rehetra momba ny fanodinana ny angon-drakinao manokana.
3. Ny angon-drakitrao manokana dia ho zahana amin'ny tanjon'ny fitantanana orinasa ao amin'ny Ibs Poland Sp z oo amin'ny alàlan'ny tranokala mifanaraka amin'ny zavakanto. 6 fizarana 1 hevitra a.
4. Izahay dia tsy mamindra na mikasa ny hamindra ny data-nao momba ny ankolafy hafa, afa-tsy ny:
• ny manampahefana, toy ny polisy na ny biraon'ny mpampanoa lalàna, raha angatahanay ny angon-drakitray ho ampahany amin'ny paika manokana mifototra amin'ny fepetra ara-dalàna,
• ireo orinasa izay miasa ho antsika sy ho anay sy manodin-drakitra ny mombamomba anao manokana ho anay sy ho an'ny zavatra ilaintsika.
5. Ny angon-drakitra manokana dia azo afindra any amin'ireo subcontractors, indrindra ny mpamatsy vahaolana vahaolana IT, raha tsy misy ifandraisany amin'ny fampiharana ny tanjon-tsika (anisan'izany ny varotra).
6. Manan-jo hiditra ny angon-drakitra manokana nafindra sy nanodinana azy ianao ary manana zo hanitsy, hamafa, mametra ny fanodinana, ny zo hamindra data, ny zon'ny hampiakatra fifanolanana, ny zo hanongana ny fanekena na oviana na oviana tsy misy fiantraikany amin'ny maha-ara-dalàna ny fanodinana, izay nambara tamin'ny fototry ny fanekena alohan'ny fanesorana azy.
7. Manan-jo hanao fitarainana amin'ny vondron'ny mpanara-maso momba ny fiarovana ny data manokana ianao, raha toa ka heverinao fa ny fanodinana ny angon-drakitra manokana avy amin'i Siemianowickie Centrum Kultury any Siemianowice Śląskie dia manitsakitsaka ny fepetra omen'ny Reggie.
8. Tsiahivina fa tsy halefa any amin'ny firenena fahatelo (firenena ivelan'ny faritra ara-toekarena eropeana) / fikambanana iraisam-pirenena ny angon-drakitra manokana ary tsy hampiasaina amin'ny fanapahan-kevitra arahin'asa (ny fiantraikany manaja ny zonao sy ny fahafahanao, izay vokatry ny fampiasa amin'ny taona 100. % automatique tsy misy fitsabahan'ny olombelona) ao anatin'izany dia tsy ampiasaina amin'ny mombamomba azy.
9. Ny fampiasana ny tranokala www.e-centrum.eu dia asa an-tsitrapo.